अनमोलमणि – मझेरी डट कम
गोलीले छिनेको मेरो खुट्टो फिर्ता देऊ
छर्राले चुँडाएको मेरो दाहिने हात फिर्ता देऊ
उखरमाउलो गर्मी थिएन। घामले हल्का राप जमिनबाट आइरहेको थियो। त्यसमा केही गन्ध महसुस गर्न सकिन्थ्यो। जाडो सकिएको थिएन। तर, बाक्ला लुगा लगाउनैपर्ने भने थिएन। राति चाहिँ कम्मल नओढी सुत्न गाह्रो थियो।
म जेब्राक्रसमा उभिएको थिएँ । ऊ पारपट्टि थिई । लमतन्न सडकले हामीलाई छुट्याएको थियो ।
ऊसँगको मेरो यो दोस्रो भेट थियो । म उभिएको पछिल्तिर पुस्तक पसल थियो । दुई पाउ जमिन ओगटेर म जहाँ उभिएको थिएँ, त्यसको ठीक अघिल्तिर लमतन्न पिच सडक सुतेको थियो । मेरो टाउकोमाथि नसुहाउँदो गरी जेलिएका बिजुलीका तार थिए तर त्यसभन्दा माथि खुला आकाश घोप्टिएको थियो । हल्का हरियो रङ पोतिएका बिजुलीका खम्बाहरू मेरै लहरमा उभिएका थिए ।
मैले साह्रै कर गरेपछि त्यस साँझ उसले भन्यो—’घटनाको पीडा मैले अनुभव गरेको छु। सुन्नेले मात्रै अनुमान गरिदिन सक्छ। उसले यसलाई कुनै चलचित्रको कथा ठानिदिन सक्छ। यो घटना सम्झेपछि मलाई रक्तचाप बढ्लाजस्तो हुन्छ। पृथ्वी हल्लिएजस्तो हावाका लप्काहरु एकैचोटी तातो मुस्लो बनेर आएजस्तो हुन्छ। आज म मेरो मुखबाट अन्तिम पटक यस विषयमा भन्दैछु। सत्य राम राम यसपछि म कसैलाई पनि यस विषयमा चिम्टी पनि बताउने छैन।’
झिनो सम्झना पनि बन्न सक्दैन मेरालागि
र म हरेक साँझ निर्ममतापूर्वक च्यात्छु प्रेमपत्रहरू
नागबेली बाटाहरु बीच
बालुवामाथिको यात्रामा छौं हामी
धमिराको देवलजस्तो वा
बालुवाको घरजस्तो छ तिम्रो सपना
जन्मोत्सवको भोज मनाएर खुसीहुनेहरु
छिट्टै व्युँतिनेछन् हत्या गरिएका निर्दोष आत्माहरु
र खुले आम मारिने छ यौटा निरंकुश राजा ।
जब मर्छन् मन्दिरकै ढोकाअघि भोकाहरू
सोच्नु तिम्रो लागि पनि बन्द छन् ती ढोकाहरू
ग प्रसाद नेताले देश यसरी हिँडनुपर्छ भनेर एउटा बाटोको खाका बनायो र काम सुरु गर्‍यो । उसले सुरु गरेको बाटोलाई विपक्षीले मन पराएन । बाटोको विषयलाई लिएर विवाद भयो, भनाभन भयो र झगडा पनि भयो ।
नीलो अन्धकार पूरै टक्टकिएर छेवैको रूखको कापबाट आएको घामको किरण मेरो अनुहारमा परेकै बेला उसले बोलायो, “जमुना !” जतिबेला म उही पुरानो छाता बोकेर बूढो घण्टाघरमुनि उभिएकी थिएँ । रातभरि यो कुमारी मैदानसँग सुतेर, खेलेर र नङ्ग्याएर यो धुलौटे सडकबाट अँध्यारो भागेजस्तै उसको आवाजसँगै मेरा धेरै तन्द्रा एकैचोटि भागे । सोचेँ, “म को हुँ ? को हो जमुना ? को हो यो पुरुष ? उसले खोजेकी जमुना मै हुँ ?”
तिमीले हेर्दा तिमीजस्तो हुन्छ
बादल जस्तै उड्छ सम्झना
र पानी जस्तै दर्किन्छ पीडा
तिमी भित्र पनि म भित्र पनि,
उस्तै छ आकाश
तिम्रै मन जस्तो-चौडा
तिम्रै अनुहार जस्तो चम्किन्छन् हररात ताराहरु
र लजाउँछन् एक अर्कासँग
त्यसैले त्यो जून
तिमीले हेर्दा म जस्तै हुन्छ
र मैले हेर्दा तिमीजस्तै हुन्छ
उसका रुप कति थिए कसैलाई थाहा थिएन। ऊ आफ्ना केही रुप जङ्गलमै छाडेर शहर’यात्रामा निस्क्यो। शहर’यात्राको पहिलो दिन ऊ चौबाटोमा पुगेर उभियो। ऊ उभिएको बाहेक अरू बाटाहरू तीनतिर छरिएका थिए। ऊ आएको बाटो पहिल्याउँदै जाने हो भने सो अन्धकार जङ्गल पुगिन्थ्यो, जहाँ कुकुरडाइनाका काँढाहरूले जेलिएको अस्पष्ट बाटो थियो। उसलाई राम्ररी थाहा थियो शहर’यात्राअघि ऊ आएको अनकन्टार जङ्गलको बाटो प्रस्ट थिएन।